Ajụjụ - Qingdao New Asia Pacific Group Company
Dabere na iwu dị iche iche, ọ dị iche. Biko lelee onye ahia anyị nke dabere na ozi gị. Daalụ!
Anyi n’ekwe nkwa ihe anyi na aka. Anyị nkwa anyị ka afọ ojuju nke ngwaahịa anyị. Na akwụkwọ ikike ma ọ bụ na ọ bụghị, ọ bụ ọdịbendị nke ụlọ ọrụ anyị ilebara ma dozie nsogbu ndị ahịa maka afọ ojuju onye ọ bụla
Uwe Nchedo, Dust-Proof Pet Face Shield, Mmiri Proof, Gowns chebe ya, Uwe ọgwụ A na-atụfu, Mmiri Proof Hdpe Apron,